Ilungelo lomshushisi lokuphikisa ukungathathi hlangothi kwakhe - uRabi Michael Avraham
Ilungelo lomshushisi lokuphikisa ukungathathi hlangothi kwakhe
Izimpendulo > Isigaba: I-Halacha > Ilungelo lomshushisi lokuphikisa ukungathathi hlangothi kwakhe
ukwethaba Ubuzwe ezinyangeni ezi-3 ezedlule
Ngokusobala uma kukhona i-mitzvah yokuthi wonke umuntu anciphise umshushisi, khona-ke kukhona i-mitzvah yokuthi umshushisi ngokwakhe angaphikisani nokungathathi hlangothi? Noma ingabe umshushisi usenalo ilungelo lokuphikisa ukungathathi hlangothi (futhi kuze kube seqophelweni lokubulala i-neutralizer)? Kimina kubonakala sengathi akukho okubhekiselwe kulokhu emithethweni ye-Mishnah Torah yoMbulali kanye Nokugcinwa Komphefumulo, Isahluko A.
Omaka bombuzo: umsukeli
mikyab Abasebenzi Kuphendulwe ezinyangeni ezi-3 ezedlule
Lolu daba luvela kubahlabeleli. IGemara ithi ukube waketula wabulala uPinchas esikhundleni esasimshushisa ngabe akakhululwa. Futhi kuMalam F.A. Mahal umbulali udingida ukwelulwa kwalo mthetho (kuthiwani ngombulali ngengozi obulala umsindisi wegazi, futhi lowo obulala isithunywa evesini lesibili kufanele futhi kukhulunywe).
Umshushisi akanalo ilungelo lokuphikisa ukungathathi hlangothi njengoba nje engenalo ilungelo lokubulala. Eqinisweni yena ngokwakhe kwadingeka azibulale esimweni sokushushiswa (noma ngokuqinisekile ayeke ukushushisa). Ngawuchaza kanjena lapha emasontweni ambalwa edlule umthetho wokuthi e-essay e-BD ayikho imvume yokumbulala ngoba ummangalelwa kumele azibulale yena. Ukubulala izigebengu kuyi-mitzvah ebekwe emphakathini, futhi isithunywa se-B'D siyisithunywa sabo bonke (okuhlanganisa nabashushiswayo).